Faah Faahin Dheeraad ah aan ka helnay Xasuuqii Kenya u geysteen Hoosingow | KEYDMEDIA ONLINE
Faah Faahin Dheeraad ah aan ka helnay Xasuuqii Kenya u geysteen Hoosingow
Kismaayo (Keydmedia) - Diyaaradaha Dagaalka ee nooca loo yaqaano Miiga ee dowladda Kenya ayaa Xasuuq aad u daran ka geystay deegaanka Hoosingow ee qiyaastii masaafo dhan 170km u jira Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobbolka Jubbada Hoose, waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac baaxad leh oo soo gaaray dad rayid ah oo aan waxbo galabsanin.
Ilaa hada inta la xaqiijiyay 15 qof ayaa ku geeriyootay in kabadan 30 qofna dhaawacyo halis ah ayaa ka soo gaaray duqeynta arxan darada ah ee aan loo meel dayin ee ay diyaaradaha Kenya ka geysteen deegaanka Hoosingow ee Galbeedka Gobbolka Jubbada Hoose shalay gabal dhicii.
Deegaanka Hoosingow malahan xarumo caafimaada waxaana dadkii shalay ku waxyeeloobay duqeyntii ay diyaaradaha Kenya ka geysteen deegaankaasi loo daad gureeyay dhanka xeryaha Qaxootiyada dalka Kenya.
15-qof ee duqeynta ku geeriyootay iyo 30- qof ee ay dhaawacyadu soo gaareen waxaa ay u badanyihiin Haween, Caruur iyo dad da'a ah kuwaasoo kamid ahaa dad xoolo dhaqata ahaa oo dhawaan ku soo barakacay deegaanka Hoosingow.
Deegaanka Hoosingow Juquraafi ahaan waxana uu Gobbolka Jubbada Hoose ugu yaalaa dhanka Galbeedka, waxaana uu masaafo dhana 170km dhanka Galbeeda kaga beeganyahay Magaalada Dekada leh ee Kismaayo, waxaana uu dhowyahay xadka Kenya iyo Soomaaliya.
Ciidamada Kenya oo ay horkacayaan Kooxda Warlords Gaandi ee duulaaka cad ku soo qaaday Dalka Soomaaliya ayaa ujeedkeedu yahay inay xasuuqdo Dadka soomaaliyeed kadibna ay la wareegto dhulka Qaniga ah ee Soomaalia, balse arrintaasi ma dhici doonto.